Nepal Life Insurance Company Limited(Nepal Life Insurance Company Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायमा अग्रणी रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त संस्था नेशनल मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको ५१% संस्थापक सेयर खरिद गर्ने गरी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ। काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहबीच नेपाल लाइफका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष...
नेपाल लाइफ : खुद बीमा शुल्क आर्जन १६.९६%ले बढ्यो, नाफा रु. ५३.५९ करोड
काठमाण्डौ । कोभिड महामारीबीच गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको व्यापार सन्तोषजनक देखिएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ३१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १६.९६ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा...
नेपाल लाइफले ल्यायो ‘नौलो केटाकेटी जीवन बीमा’ योजना, यस्ता छन् सेवा–सुविधा
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले केटाकेटी शिक्षा र विवाह सावधिक जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलतापश्चात् अझ परिस्कृत रुपमा ‘नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना’ सावधिक जीवन बीमा ल्याएको छ। नेपाल लाइफले ग्राहकको आवश्यकता तथा चाहनाअनुसारका बीमा योजनाहरु बजारमा ल्याउने क्रममा यो नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना ल्याएको हो। यस...
नेपाल लाइफमा ग्लोबल कलेजका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको अवसर
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी इन्टर्नको अवसर पाउने भएका छन्। यस विषयमा सोमबार एक कार्यक्रमका बीच नेपाल लाइफ र ग्लोबल कलेजबीच एमओयू सम्पन्न भएको छ। नेपाल लाइफको कर्पोरेट कार्यालयमा आपसी हितका लागि अगाडि बढ्ने सम्झौता भएको हो। नेपाल लाइफका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी...
नेप्सेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३१% बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३१ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्जले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट चुक्तापुँजीको कुल ५१ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो। जसमा ३१ प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी २० प्रतिशत नगद लाभांश रहेको थियो। सोही ३१ प्रतिशत बोनस सेयर आज नेप्सेमा सूचीकृत...
नेपाल लाइफको ३१% बोनस सेयर कहिलेसम्म सेयरधनीको खातामा आउला ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेपछि प्रतिफलको आशा अवश्य पनि हुन्छ । तर लाभांश अनुमोदन भएको महिनौँसम्म पनि आफ्नो खातामा बोनस सेयर नआउँदा लगानीकर्ताहरु अन्यौलमा पर्ने गरेका छन्। यस्तै अन्यौलतामा छन्, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताहरु। नेपाल लाइफ देशकै उच्च बोनस दर घोषणा...
मार्केट अपडेट : २ घन्टामा सवा ९ अर्ब बढीको कारोबार, ११.६४ अंकले घट्यो बजार
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन मंगलबार बजार खुलेको २ घन्टामै सवा ९ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भइसकेको छ। नेप्से परिसूचक भने ओरालो लागेको छ। बजार खुलेको सुरुआती चरणमा उकालो लागेको नेप्से परिसूचक दोस्रो घन्टामा ११.६४ अंकले ओरालो लागेको हो। अहिले नेप्से ३०१४.१८ को विन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक...
नेपाल लाइफको मर्मस्पर्शी सचेतनामूलक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अहिलेको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै मर्मस्पर्शी सचेतनामूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले ‘सचेत बनौँ ! करोनाविरुद्धको यो लडाइ घरमै बसेर लडौँ’ भन्ने सन्देशसहितको सांगीतिक भिडियो तयार पारेको हो। यस कोरोना महामारीमा सबैजनाले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न आग्रह गरेको छ। यो...
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन ३५.४९%ले बढ्यो, नाफा रु. ५०.६६ करोड
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३५.४९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन १८ अर्ब ४१ करोड...
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आफ्नो स्थापनाको २० वर्ष पुरा गरी २१ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कम्पनी वि.स. २०५८ साल वैशाख २१ गते स्थापना भई बीमित तथा सेवाग्राहीलाई निरन्तर उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। देशका दुरदराज, कुनाकन्दरासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउँदै मानिसको जीवनमा आइपर्ने जोखिममा आर्थिक भार कम गर्दै...
बीमाशुल्क आर्जनमा नेपाल लाइफ अगाडि, कसको कति ?
काठमाण्डौ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना (फागुनसम्म) मा ८२ अर्ब बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्। बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीले ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन्। यो रकम गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३६.५० प्रतिशत बढी हो। गत आर्थिक...
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बम्पर लाभांश सुरक्षित गर्ने आज माघ १३ गते अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि यो कम्पनीले भोलि माघ १४ गतेदेखि माघ २६ गतेसम्म बुक क्लोज गर्न निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आजसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्र यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश...
- अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । अहिले धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षणका रुपमा रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अघि सारेको ‘सेयर खण्डीकरण’ को प्रस्तावका विषयमा चौतर्फी चर्चा हुन थालेको छ। नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले सेयर खण्डीकरण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो। कम्पनीले आगामी वार्षिक साधारणसभामा सेयर...